Subject: Casharka 22-aad: DVD Drive-ka Thu Feb 10, 2011 4:13 am
muujinaya nooc ka mid ah DVD Drive-yada suuqa ka jira
DVD drive-ku waa halka kumbiyuutarka laga geliyo
saxammada DVD-ga ee lagu daawado filammada iwm. Waxa kale oo DVD drive-ka loo adeegsadaa in
saxammada DVD-ga akhbaar lagu kaydiyo ama akhbaar ku jirta wax laga
beddelo ama lagaba tirtiro. Saddexda xaraf ee DVD-ga waxaa la sheegaa
in ay u taagan yihiin "Digital Video Disc" ama "Digital Versatile Disc", hase yeeshee
dadka qaar ayaa waxay ku doodaan in saddexdaas xaraf la iska doortay oo aysan
wax micne leh u taagnayn.
DVD drive-ku sida CD Burner-ka ayuu xagga
muuqaalka, cabbirka iyo dhismahaba wuxuu kala mid yahay CD-ROM Drive-ka
oo aan uga soo hadalnay [You must be registered and logged in to see this link.]
iyo [You must be registered and logged in to see this link.]. DVD drive-ku wuxuu kumbiyuutarka ugu xirmaa sida CD-ROM
Drive-ka wuxuuna santuukha kumbiyuutarka ka galaa halka uu CD-ROM
Drive-ku ka galo. Marka la eego Windows, waxaa DVD drive-ka astaan u noqda hadba xarafka ugu horreeya
ee bannaan. Sidaa darteed waxaa laga yaabaa inaad aragto DVD drive uu astaan
u yahay xarafka D: iyo mid kale oo uu astaan u yahay
xarafka E: ama F: iwm.
DVD Drive-ku wuxuu in badan kala mid yahay CD-ROM Drive-ka
iyo CD Burner-ka sidaa darteed waxaad akhbaar badan oo ku saabsan
DVD Drive-ka ka helaysaa casharrada ka hadlaya CD-ROM-ka iyo CD Burner-ka.
Haddaba mar kasta oo aan ka hadlayno dhinacyada ay isaga midka yihiin
waxaan kuu tilmaami doonaa casharradaas.
Baaxadda saxammada DVD-gu aad ayay uga weyn tahay kuwa CD-ROM-ka iyo CD
Burner-ka waxayna baaxaddoodu gaaraysaa inta u dhexeysa 4.7 GB ilaa 17
GB (xusuusnow in halkii GB uu u dhigmo 1000 MB). Kordhinta baaxadda DVD-ga
waxaa keenay arrimaha soo socda:
Marka saxammada DVD-ga iyo CD-ga akhbaar lagu qorayo waxaa oogada
saxanka lagu gubaa dhibco aad u yar yar oo ili ma aragtay ah. Haddaba
si loo[You must be registered and logged in to see this image.]
kordhiyo baaxadda saxanka DVD-ga waxaa la yareeyay dhumucda dhibcaha
lagu gubo oogada DVD-ga iyadoo halkii dhibicba dhumucdeeda laga dhigay ugu
yaraan 0.4 microns (0,001 mm) halka dhumucda dhibicaha lagu gubo oogada
CD-gu ay ka tahay ugu yaraan 0.83 microns. Teeda kale waxa la yareeyay fogaanta
u dhaxaysa Track-yada saxanka DVD-ga oo fogaantaas waxaa laga dhigay 0.74
microns halka fogaanta u dhaxaysa Track-yada CD-gu ay ka tahay 1.6 microns.
Halkaa waxaa ka dhashay in akhbaarta lagu qoro DVD-gu ay aad isugu cufnaato,
taasoo keentay in saxanka DVD-gu uu qaado akhbaar gaaraysa ilaa 4,7 GB.
Fadlan fiiri labada sawir ee midigta ka muuqda kuwaas oo muujinaya farqiga
xagga cufnaanta akhbaarta ee u dhexeeya CD-ga iyo DVD-ga.
Waxaa la suurto galiyay in akhbaarta saxanka DVD-ga lagu qoro
laba lakab (layers) oo is dul saaran iyadoo halkii lakabba uu qaado 4.7
GB, taasoo keentay in DVD-gu uu qaado akhbaar gaari karta ilaa 8.5 GB.
Waxaa kale oo la suurto galiyay in saxanka DVD-ga labada dhinacba
wax looga qoro taasoo iyaduna keentay in hal saxan uu qaado akhbaar
gaari karta ilaa 17 GB.
Marka laga eego xagga baaxadda waxaa guud ahaan saxammada DVD-ga loo kala
qaadaa afar nooc oo kala ah:
Single sided / single layer oo micneheedu yahay
in saxanka akhbaarta hal dhinac looga qoro, islamarkaana akhbaarta lagu qoro
hal lakab oo kaliya. Saxammada noocaan ah waxay qaadaan akhbaar gaari karta
Single sided / Double layer oo micneheedu yahay
in saxanka akhbaarta hal dhinac looga qoro, islamarkaana akhbaarta lagu
qoro laba lakab oo is dul saaran. Saxammada noocaan ahi waxay qaadaan akhbaar
gaari karta ilaa 8.5 GB.
Double sided / Single layer oo micneheedu yahay in saxanka
labada dhinacba akhbaarta looga qoro, laakiin dhinac kasta akhbaarta lagu
qoro hal lakab. Saxammada noocaan ah waxay qaadaan akhbaar gaari karta ilaa
Double sided / Double layer oo micneheedu
yahay in saxanka labada dhinacba akhbaarta looga qoro, islamarkaana dhinac
kasta akhbaarta lagu qoro laba lakab. Saxammada noocaan ah waxay qaadaan
akhbaar gaari karta ilaa 17 GB.
Saxammada DVD-gu waxay xagga cabbirka kala mid yihiin kuwa CD-ROM-ka
sidaa darteed fadlan fiiri [You must be registered and logged in to see this link.]
gaar ahaan qaybta uu ciwaankeedu yahay "Baaxadda iyo Cabbirka CD-ROM-ka".
DVD Drive-ku wuxuu faa'iidooyinka CD-ROM-ka iyo
CD Burner-ka ee aan hore u soo sheegnay ku sii kordhiyay iyadoo
baaxadda saxammada DVD-gu ay aad uga weyn tahay tan saxammada CD-ROM-ka
iyo kuwa CD-Burner-ka. Hal saxan oo DVD ah ayaa waxaa lagu kaydin karaa
akhbaar la mid ah inta ay qaadaan 7 ilaa 26 saxan oo ah CD-ROM-ka caadiga
ah. Taasi waxay keentay in hal saxan oo DVD ah lagu kaydiyo:
dhamaan akhbaarta ku jirta kumbiyuutarka
filin dheer oo soconaya ilaa 3 saacadood islamarkaana tayada sawirradiisu aad u sarrayso iyo in weliba
filinka la raaciyo akhbaar dheeri ah oo filinka barbar socota oo dadkii
filinka sameeyay ay sharraxaad uga bixinayaan sida filinka loo sameeyay
iyo micnaha iyo ula jeeddada ka dambaysa qayb kasta oo filinka ka mid ah.
Tiro ciyaaro ah (games) oo ay tayada sawirradoodu (Graphics) ay
aad u sarrayso.
dhamaan qaybaha uu ka kooban yahay mid ka mid ah buugaagta loo
yaqaan encyclopedia ee ka hadla taariikhda iyo dhacdooyinka adduunka, waddammada,
dadka, xayawaanka, cayayaanka, dhirta, macdanta iyo dhammaan laamaha culuunta
Faa'iidooyinka kale ee uu DVD Drive-ku leeyahay waxay
la mid yihiin kuwa CD-ROM-ka, sidaa darteed fiiri [You must be registered and logged in to see this link.] gaar ahaan qeybta uu ciwaankeedu
yahay "Muhiimadda CD-ROM-ka".
DVD Drive-ku wuxuu xagga dhismaha guud kala mid
yahay CD-ROM Drive-ka iyo CD buirner-ka, sidaa darteed fadlan fiiri Cashar-ka
19-aad gaar ahaan qeybta uu ciwaankeedu yahay "Dhismaha CD-ROM
Drive-ka". Si kastaba ha ahaatee waxaa jira dhinacyo uu DVD Drive-ku
kaga duwan yahay CD-ROM-ka iyo CD Burner-ka. Dhinacyadaas waxaa ka mid
Head-ka DVD drive-ku
wuxuu adeegsadaa farsamo u suurto galinaysa in uu iftiinka Laser-ka ku
beego hadba dhinaca saxanka iyo lakabka uu rabo inuu wax ku qoro ama wax
ka soo akhriyo. Taasoo micneheedu yahay in DVD drive-ku uu awood u leeyahay
in iftiinka uu saxanka uga shido dhinaca hoose islamarkaana uu ku beego
oo uu wax ka soo akhriyo dhinaca kore lakabka ugu sarreeya. Haddii tusaale
ahaan uu saxanku yahay Double-sided / Double layer wuxuu markaa
iftiinku ka gudbayaa saddex lakab oo akhbaar ah si uu u soo akhriyo akhbaarta
ku qoran lakabka ugu sarreeya isagoo aan akhbaarta isku khaldayn.
DVD Drive-ku wuxuu u
baahan yahay saxammo gaar ah oo samays ahaan isaga loogu
tala galay saxammadaas oo u kala baxa sida aan kor ku soo sheegnay.
Marka laga reebo in saxanka DVD-ga akhbaar lagu qoro, waxaa
kale oo DVD Drive-ka loo adeegsadaa in lagu soo akhriyo wixii akhbaar
ah ee ku jira saxammada DVD-ga, CD-ROM-ka, Audio Drive-ka (Stereo) iyo kuwa
CD-R iyo CD-RW oo ay DVD drive-yada badankoodu wax ka soo akhrin karaan.
Markaa wuxuu DVD Drive-ku u shaqeeyaa sida CD-ROM-ka caadiga ah. Taas
micnaheedu wuxuu yahay in DVD Drive-ku uu qaban karo dhammaan howlaha
ay qabtaan CD-ROM-ka iyo CD Burner-ka iyo in kale oo lagu sii kordhiyay.
Haddaba sida aad halkaa ka garan karto DVD Drive-ku wuxuu ku socdaa in mustaqbalka
uu suuqa ka saaro CD-ROM-ka iyo CD Burner-ka labadaba.
Casharkaanna halkaas ayaan ku joojinaynaa. Casharka
xiga waxaan hadduu rabbi idmo ku soo qaadan doonnaa noocyada iyo xawaaraha
Is Diiwaangalintaa : 17/07/2011
Subject: Re: Casharka 22-aad: DVD Drive-ka Sun Jul 17, 2011 10:48 pm
ASC waaan idin salaamay dhammaan walaalahayha bahda webka shabakada madow waxan jeclaan laha inan wax idinka weydiiyo cajalad DVD ayan rabaa inan ka fiirsado program loo duubay film ahaan balse hadii aan geliyo computerka iyo maqal ah ayan maqlaya oo keli ah waxa iga saran movie calaamad X oo i tusaysa inan fiirsan karin hadaba max aiga qaldan si aan u helo muuqaalka programka dvd ga. mahadsanidin by Maxibo
Is Diiwaangalintaa : 18/07/2011
Subject: Re: Casharka 22-aad: DVD Drive-ka Mon Jul 18, 2011 7:36 pm
walaal sawir lama arkayo
Subject: Re: Casharka 22-aad: DVD Drive-ka